mi trano Archives - SmartMe
Archives tag: mi home
Dom » Entries tagged with "mi home"
Xiaomi dia manolotra fanavaozana ny fampiharana Mi Home
zava-baovao, izaho an-trano, xiaomi
Xiaomi dia nanolotra fanavaozana vaovao momba ny fampiharana Mi Home. Ny fanavaozana dia efa afaka andro vitsivitsy amin'ny fitaovana misy iOS natsangana. Ny fampiharana Mi Home 6.1.202 dia misy fiasa mahaliana sasany, toy ny voatondro ...
Ny ketia Xiaomi vaovao dia hampiseho ny mari-pana amin'ny fampisehoana
kettle hendry, izaho an-trano, xiaomi
Vao haingana aho no naheno an'io fanontaniana io, oviana no hitranga ny kesika Xiaomi vaovao? Tsy maintsy nihena i Xiaomi ary namoaka vokatra hafa izy ireo. Mijia Thermostat Pro no mpandimby ny kettle kisary. Ny fiovana lehibe raha ampitahaina amin'ilay efa teo alohany no aseho an-tsary, ...
Ny fanatsarana fomba mandeha ho azy amin'ny Xiaomi Mi Air Purifier 3H
10 Novambra 2020
miaro mpanadio rivotra 2, mi 2s mpanadio rivotra, miaro mpanadio rivotra 3, miaro mpanadio rivotra 3h, izaho an-trano, fanadiovana rivotra, xiaomi, xiaomi trano, fahasalamana
Ny fototry ny olana Tamin'ny taona 2017, ny tranokala smartairfilters.com dia nanipika fa ny mpanadio rivotra dia mitazona ny haavon'ny fandotoana avo kokoa noho ny notoloran'ny fikambanana WHO. Soso-kevitra nomen'ny WHO: salanisa isan'andro: PM2.5 <25 μg / m3, PM10 <...
Averin'i Aqara Hub ho toy ny bokotra panic!
hubara aqara, homekit, izaho an-trano, siri shortcut, xiaomi
Raha nahita ny vaovao an-gazety omaly aho dia nahita torolàlana mahaliana iray avy amin'ny HomeKit News. Izy io dia naneho ny fomba hamadihana ny Aqara Hub ho bokotra Panic. Koa amin'ny fomba ahoana no hampiasa baiko tsotra ao Siri ...
Fomba roa ho an'ny faritra roa ao amin'ny Mi Home (Android)
izaho an-trano, xiaomi, fampiharana novaina
Betsaka ny olona manontany ny fomba hitondrana faritra roa indray mandeha any Mi Home (poloney sy shinoa). Amin'ity lahatsoratra ity, dia hazavaiko aminao ny dingana tsirairay ny fomba ahafahanao mitantana ireo fitaovana roa miaraka ...